Mooshin ka dhan ah Jawaari oo La Filayo in Baarlamaanka ay horgeeyaan Xildhibaano taageersan Khayre. – Hornafrik Media Network
Xafiisyadda Madaxda Dowladda ayaa laga dareemayay Saacadihii la soo dhaafay Dhaq Dhaqaaqyo Siyaasadeed oo la doonayo in Xilka looga tuuro Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia, Maxamad Cusmaan Jawaari, iyadoo la abaabulayo Mooshin ka dhan Jawaari oo ay gadaal ka riixayso Xukuumadda Somalia.
HornAfrik ayaa ogaatay Xildhibaanada taageersan Madaxtooyada iyo Xukuumadda ay wadaan mooshinka, isla markaana diyaar garowga uu yahay mid bilow ah oo la doonayo in maalmaha soo socda la shaaciyo.
Hadal heynta ku aadan mooshinka ayaa tan iyo xalay ka socotay qaar ka mid ah Hotelada Muqdisho oo kulamo hoosaadyo ay ku yeesheen Xildhibaano.
Wararka qaar ayaa sheegaya in mooshinkan lagu soo beegi rabo maalinta Sabtida ah oo qorshuhu yahay in Golaha shacabka la horkeeno warbixinta Guddigii loo xilsaaray baaritaanka go’aankii Xukuumadda ka qaadatay dhiibistii C/kariin Qalbi Dhagax oo bishii August loo gacan geliyay Itoobiya.
Guuxa iyo dhaq dhaqaaqyada socda ayaa waxay banaanka soo dhigayaan kala shaki cusub oo soo kala dhex gala Madaxda dowladda, waxaana arrinta la wado ee mooshinka Jawaari ay horseedi doontaa mowjado siyaasadeed.
Mooshinka ka dhanka ah Jawaari ayaa imaanaya kadib markii ay badashay Xukuumaddu Mowqifkeedii ku aadanaa Dowlad Goboleedyadda oo heshiis lagula galay Jawaari in laga dhigo Farkeeto-Madaxwaynaha Koonfur Galbeed, marka meesha laga saaro Shariif Xasan, halka Jawaari isna loo xilsaaray inaan Qadiyadda Qalbidhagax go’aan looga gaarin Baarlamaanka Somalia.
Ugu dambayn Khayre iyo Xukuumadda uu hogaamiyo waxay qaadeen Siyaasad ka duwan tii hore oo ah in la joojiyo Dagaalka ka dhanka ah Dowlad Goboleedyadda, Waxayna cabsi ka qabaan in Jawaari oo arrintaasi ka caraysan uu ku furo Mowjado Siyaasadeed, waana sababta keentay inay hadda abaabulaan Mooshin ka dhan ah Jawaari.
Maraykanka Oo Sheegay Inay Bishaan Somalia Ka Fuliyeen Duqeyntii Ugu Badnayd Muddo 10-Sanno